FTS 22 Apk Dhawunirodha Ye Android [Nhabvu Mutambo] - Luso Gamer
FTS 22 Apk Dhawunirodha Ye Android [Nhabvu Mutambo]
Yekutanga Kubata Soccer yaigara ichitariswa uye kuverengerwa pakati peinonyanya kuridzwa nhabvu yemutambo wepamhepo. Nekufamba kwenguva shanduro dzakasiyana dzakaburitswa nevagadziri. Nhasi pano tadzoka nechizvarwa chinotevera mod vhezheni inonzi FTS 22 Apk.
Rangarira pano isu tiri kutsigira nekupa yazvino vhezheni sechipo cheGore Idzva. Kusvika panguva ino iyo yazvino vhezheni yekushandisa yemitambo application haisvikiki pane play store. Kunyange zvitoro zvepamutemo hazvikwanisi kuzvipa.
Asi pano pawebhusaiti yedu, tiri kubudirira kuunza shanduro yekushandisa yeandroid Mod Mutambo. Iyo yazvino gameplay inopa akasiyana maficha anosanganisira kugadziridzwa. Saka wagadzirira kuona izvo zvazvino maficha wobva waisa FTS 22 Mod.
Chii chinonzi FTS 22 Apk
FTS 22 Apk ndeye yakakwana yepamhepo nhabvu yemitambo yemitambo application yakagadzirwa nevagadziri. Ndiani akatoshanda uye aive neruzivo rwakanaka kuvandudza Dream League Soccer. Chikonzero chekugadzira iyi imwe mutambo wenhabvu ndeyekupa yakanakisa muunganidzwa.
Saka vatambi havazombofi vakafinhwa vachitamba mitambo mimwechete kwenguva refu. Kunze kwekupa akasiyana maficha uye maitiro ekutamba. Vagadziri vakatarisawo pane dzimwe nyaya huru uye gare gare mukati meiyi vhezheni ese iwo makuru matambudziko anogadziriswa.
Iyo inonyanya kukosha kuvandudzwa kwakaitwa mukati memutambo ndeye Graphical Display. Vazhinji vevatambi vanosangana nedambudziko iri rekutsvaga kuratidzwa kwakatsetseka. Kunyangwe vagadziri vachiti vanovandudza iyo gameplay kuratidza.
Nekudaro, vazhinji vevatambi ivavo vanogona kutadza kuona kuvandudzwa ikoko. Zvakadaro, isu pachedu takatarisa kuvandudzwa uye takawana zviri pamutemo kukwidziridzwa mukati. Saka iwe unoda kunakidzwa nekuvandudzwa kwemutemo pane kuisa FTS 22 Mod Liga Indonesia.
zita FTS makumi maviri
zera 308.62 MB
Package Zita com.firsttouchgames2022.bygilagamev3
Inodiwa Android 4.0.1 uye Uyezve
chikamu Games - Sports
Chaizvoizvo pano isu tiri kutsigira uye kuratidza iyo modded gameplay. Mukati meiyo yepamutemo vhezheni yemutambo, ese akakosha maficha anosanganisira ekutamba modes akakiyiwa. Uye inongosvikika kutamba mushure mekudyara mari chaiyo.
Kunyangwe vatambi vachikumbirwa kuisa mari chaiyo maererano nekutenga mari yegoridhe. Kana vatambi vachinge vabudirira kuunganidza mari yegoridhe yakakwana. Ipapo ivo vanogona kuvhura iwo ma pro maficha mukati memutambo.
Maitiro emutemo aiita seanodhura uye asingagoneki kune vateveri. Kunyangwe vatambi vanowanawo idzo mari dzegoridhe kupedzisa mabasa uye zvinangwa zvemwedzi. Asi maitiro anoita senge nguva nemari inodya muchokwadi.
Naizvozvo tichifunga nezvekukumbira kwevatambi, pano isu tiri kutsigira iyo modded vhezheni. Iko mamodhi ese akavhurwa uye vatambi vanogona kunakidzwa nekusingaperi pro maficha emahara. Rangarira iyo counter yegoridhe ichavandudzwa pane yega yega login.
Kubva pazvinodzora kuenda kuFTS kuratidzwa kunovandudzwa mukati meazvino gameplay. Anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu makirabhu nevatambi vekurota varipo kuti vasarudze. Saka iwe unoda kutamba mutambo neshamwari uye dzimwe nhengo. Wobva waisa yazvino FTS 250 Asia Android.
Key Zvinyorwa zveMutambo
Iyo gameplay yakasununguka kurodha.
Kuisa mutambo kunopa chiitiko chechokwadi chenhabvu.
Anopfuura 250 makirabhu akasiyana anowanikwa kusarudza.
Kurota vatambi vanowanikwawo kusarudza.
Nhandare dzakasiyana siyana dzinochinjika uye zvikwata zvinosvikika.
Star Player, Mwaka uye Dream Team modes dzakavhurwa.
Hapana kushambadza kwakananga kunoonekwa.
Maitiro ekurodha FTS 22 Apk OBB
Kunyangwe isu tisingakwanise kuona mutambo wekutamba paPlay Store. Izvi zvinoreva kuti vashandisi veAndroid vangatadza kurodha mutambo kuburikidza nePlay Store. Saka kubva uko vateveri vanogona kurodha zviri nyore uye kunakidzwa nemutambo wekutamba pasina kunetseka.
Kana iwe uri kusangana nedambudziko rekutsvaga rechokwadi sosi. Ipapo isu tinokurudzira avo android gamers kushanyira webhusaiti yedu uye nyore kurodha mutambo. Ingodzvanya pane yakapihwa link uye unakirwe nekutamba FTS 22 Mod Liga Indonesia Apk.
Maitiro ekuisa uye kutamba Game
Chekutanga vatambi vanokumbirwa kurodha yazvino vhezheni ye zip file. Iyo inosvikika kurodha kubva pazasi yakapihwa link. Kana iyo zip faira yatorwa zvinobudirira. Iye zvino bvisa zip faira yakatorwa uye isa Apk faira.
Mushure mekuisa iyo yemitambo app, ikozvino kopi iyo OBB faira kubva yakabviswa folda. Uye wobva wapfuura mukati me Android> OBB folda. Vashandisi vanokumbirwa kutevedzera nhanho imwechete yeData Folder. Kana maitiro apera, zvino shanyira iyo mobile menyu uye tanga mutambo.
Iyo yekutamba application yatiri kuratidza pano ndeye yepakutanga. Kunyangwe isu takatarisa mafaera eapp mukati meakasiyana android smartphones tisati tapa iyo mukati yekurodha chikamu. Saka vateveri venhabvu vanogona kunakidzwa neazvino gameplay pasina kunetsekana.
Mazhinji emamwe maapplication enhabvu emitambo anoburitswa uye akagovaniswa pano. Kuti utarise mamwe maapplication emitambo ane hukama, ndapota tevera maURL. Zviri Kurota League Soccer 2022 Apk uye FM 22 Apk.
Kana iwe uchida maitiro ekutamba eFTS uye uchitsvaga online sosi. Kurodha iyo yechokwadi mod vhezheni yemafaira emutambo mahara. Ipapo iwo mafeni anogona nyore kuwana FTS 22 Apk Data kubva pawebhusaiti yedu vachishandisa kudzvanya kumwe kudhawunirodha sarudzo.
Categories Sports, Games Tags FTS 22 Apk, FTS 22 Apk Dhata, FTS 22 Apk OBB, FTS 22 Mod, Mod Mutambo Post navigation
Filme Flix TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu]
HDO Player Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu]